रवि लामिछानेलाई न्यौपानेको ‘मार्मिक’ खुला पत्र ! « Dainik Online
रवि लामिछानेलाई न्यौपानेको ‘मार्मिक’ खुला पत्र !
प्रकाशित मिति : ६ असार २०७९, सोमबार १ : १६
केही बर्षअघिसम्म म तपाइँलाई चिन्दैन्थेँ । जब तपाईले न्यूज २४ मा लगातार ७२ घण्टा कार्यक्रम चलाएर टेलिभिजन कार्यक्रमको इतिहासमा विश्व रेकर्ड कायम गरी गिनिज बुकमा नाम लेखाउनु भयो, त्यसबेलाबाट तपाईँलाई हल्का चिन्न थालेको हुँ । जुन दिन तपाईले भोक प्यास, निद्रा नभनी ७२ घण्टा अर्थात् ३ दिनसम्म अनवरत खटाइका साथ ऐतिहासिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो त्यसदिनबाटै तपाइँप्रति म बढी पुलकित थिएँ । सोही कार्यक्रमबाटै तपाईबाट म वास्तविक रुपमा प्रभावित भएको थिएँ । अनि मैले तपाईलाई निरन्तर फलो गर्न थालेँ।
। आजकल त म तपाईका हरेक गतिविधिमाथि जानकार छु । त्यसैले पत्रकारिताबाट यहाँले बनाउनु भएको छविको सर्वप्रथम म मुक्तकंठले प्रसंसा गर्दछु । सायद २०७६ सालमा हुनुपर्दछ पप गायक धिरज राईको नेतृत्वमा बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल अभियान चलेको थियो । त्यही अभियानको क्रममा काठमाण्डौको टुँडिखेलमा एक विराट कार्यक्रम पनि आयोजना भयो ।
र १ लाख हस्ताक्षर पनि गरिएको थियो । त्यो कार्यक्रममा हामी हजारौ समर्थक त्यहाँ थियौ भने तपाई पनि त्यो कार्यक्रममा आएर अभियान्ताको रुपमा आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो । तपाईले टेलिभिजन पत्रकारिताबाट के कमाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ उपस्थित हजारौले तपाईको नाम लिनासाथ गरेको हुटिङ र गडगडाहक तालीबाट थाहा पाएँ । अनि मलार्य पनि पत्रकारितामा रहिरहन मन लागेको थियो । अहिले पनि म पत्रकारितामै छु । त्यति खेर तपाई न्युज २४ टेलिभिजनमा सिधा कुरा जनतासंग कार्यक्रमको प्रस्तोता हुनुहुन्थ्यो ।
अदम्य साहस र चौडा छाती बनाई वडो स्वाभिमान र निर्भिकताकासाथ तपाईले न्युज २४ टेलिभिजनमा अनवरत रुपमा सिधा कुरा जनतासंग कार्यक्रम चलाउनु भयो । तपाईँको एक्लो कार्यक्रमले नै हिजो न्यूज २४ को उचाई पनि शिखरमा पुगेको थियो सायद ।
आज तपाईले जे कमाउनु भएको छ मलाई लाग्छ त्यही कार्यक्रमको देन हो । त्यो कार्यक्रममा तपाईले जे जस्ता सामग्री प्रसारण गर्नुभयो जनहितमा रहेर, तिनैबाट आज ३ करोड नेपालीमाझ परिचित पात्र बन्नु भएको छ तपाईँ । वास्तविक रवि यसरी बन्नुभएको हो । त्यही कार्यक्रमको सफलताको कारण नै तपाईले आफ्नै टेलिभिजन ग्यालेक्सी फोर के पनि संचालन गर्न सफल हुनुभयो । अर्थात् एउटा कार्यक्रम प्रस्तोता संचार मालिक बन्नुभयो ।
चाहे न्यूज २४ मा रहँदा होओस्, चाहे ग्यालेक्सीको छोटो यात्राको क्रममा होओस् तपाईले प्रसारण गरेको सिधा कुरा जनतासंग र सिधा कुरा कार्यक्रमले ३ करोड नेपालीको मन जित्न सफल भएको थियो । तपाइँले त्यसरी नेपालीको मन जित्नुभयो ।
तर आज तिनीहरु सबैले सुरा, सुन्दरी र संगितसहितको दिवारात्री भोज गरिरहेका छन् । किन कि रवि लामिछानेले अब सिधा कुरा छोड्यो । तपाईले टेलिभिजन कार्यक्रम छोडेपछि चोरदेखि बलात्कारीसम्म खुसीले गद्गद् छन् । नाचगानमा बुर्कुसी मारिरहेका होलान् ।
हुन त त्यो कार्यक्रम बन्द भएको छैन तर मलाई विश्वास छैन तपार्इँजति निडर भएर त्यो कार्यक्रम सायदै अरु कसैले चलाउला । आफ्नो ज्यानलाई खुकुरीको धारमा राखेर परिवार समेत बिर्सि तपाईले जसरी कार्यक्रम प्रसारण गर्नुभएको थियो अरु संचालकमा त्यो दम हुने छैन । यो दम पाल्न अब म युवराज कँडेललाई आग्रह गर्दछु ।
अनेक आरोप पत्यारोप र आफूमाथिका षडयन्त्र चिर्दै प्रसारण गरेको कार्यक्रम तपाईले यसरी चटक्कै छोड्नु हुन्छ भन्ने मलाई पटक्कै लागेको थिए । अब ती सबै भूत भइसके । यसपछि मेरो मनभरी तपाईप्रति प्रश्नैप्रश्नै छन् रवी लामिछाने ज्यू ।
तपाई कुन दलमा जादै हुनहुन्छ या स्वतन्त्र दल खडा गर्नुहुन्छ या एक्लै स्वतन्त्र आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उठ्नु हुन्छ त्यो पछि नै थाहा पाउने छु । तर यति भन्दछु कि तपाईले टेलिििभजन कार्यक्रमबाट पाउनुभएको छवि र नाम अब राजनिितबाट किमार्थ पाउनु हुने छैन । भलै तपाई कुनै पार्टीको अध्यक्ष बन्नुहोस् या चुनाव जितेर सांसद र मन्त्री बन्नुहोस् या प्रधानमन्त्री नै बन्नुहोस् । यसपछाडीका थुप्रै कारण छन् ।
तपाईमाथि यो भनिरहँदा आज मलाई रविन्द्र मिश्रको झलझली याद आउँछ र आज उहाँलाई विचरा भन्नु शिवाय मसंग अरु कुनै शब्द छैनन् । उहाँलाई पनि लाग्दथ्यो मजस्तो बीबीसिीमा सवालजवाफ गर्ने मान्छेलाई राजनीतिमा सबैले सजिलै पत्याउँछन । तर राजनैतिक दृश्य बाहिर देखेजस्तो छैन् नै छैन । उहाँले राजनीतिबाट हात नै धोएर आज ग्लानीको आसुमा डुविरहनु परेको छ रातदिन ।
यदि तपाई पनि त्यही मनोविज्ञान र मनोदशाको समुद्रमा पौडिएर राजनैतिक यात्रा आरम्भ गर्न लाग्नु भएको हो भने समय घर्किएको छैन तपाईले आजै फेरि टेलिभिजन कार्यक्रममा फर्कने घोषणा गर्नुहोस् । सबैले स्वागत गर्नेछन् । ताली बजाउने छन् होइन भने तपाई पाइला फुकिफुकि हिँड्नु पर्ने यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ । थोरै पनि चेत गुमाउदा तपाइँर्को सारा सर्वस्व गुम्नेवाला छ ।
फेरि भन्छु यी पुराना र खिया लागेका कुनै पनि दलको दलदलमा नफस्नुहोला । फसे पनि पाइला फुकिफुकि हिँड्नुहोला । असार ७ गते ३ करोड नेपालीले हेर्न चाहेको पनि यही हो । लामिछाने ज्यू, तपाइलाई राजनैतिक सफलताको भव्य शुभकामना दिदै निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्रीसम्म भएर मुलुकलाई कायापलट गरेको हेर्न पाऔँ । यही रहरको हुटहुटीको साथमा मेरा खाम यही बन्द गर्दछु । उही तपाइँको भलो चिताउने मान्छे चन्द्रकान्त न्यौपाने, काठमाण्डौँ ।